Usavi: nyama, madomasi, nemurivo. Mirivo inosanganisira chemberedzagumhana, tsunga, muboora, munyevhe ne covo.
Bure kana nhotombodza yesadza (Sadza cooked unsatisfactorily because of insufficient heat in the final stage of cooking) apa kureva sadza raburwa pamoto risina kushinyira.
Chewa vanoti nsima kureva sadza. Swahili vanoti ugali kureva sadza. Makua vanoti mapele kureva sadza. Lugwere vanoti chikonde (n. fist).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Sadza&oldid=88583"
This page was last edited on 8 Nyamavhuvhu 2021, at 15:36.